iHelp 3G / 4G GSP Tracking Keychain, Ntinye mmiri, Mgbagha & Nchọpụta ọdịda (Okenye ya na Dementia) [OMGGPS10D] | Ngwọta OMG
iHelp 3G / 4G GSP Nchọpụta Keychain, Waterproof, Motionless & fall Detection (Elderly with Dementia) [OMGGPS10D]
iHelp Ngwaọrụ GPS Tracker nwere ike nyochaa oge nke ndị agadi, mgbe enwere ọdịda, iHelp nwere ike na-ebute SMS ma kpọọ ndị òtù ezinụlọ 5 na-akpaghị aka, ka e nwee ike inye aka ozugbo.
The iHelp Ngwaọrụ GPS Tracker enyere ezinụlọ na ndị agadi aka na nsogbu ndị metụtara nsogbu. Ọ bụrụ na ị nwere nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye òtù ezinụlọ gị nke na-egosi usoro nke omume echefu echefu, ma ọ bụ na-agbasi mbọ ike ibi ndụ nke onwe ya, iHelp Ngwaọrụ GPS Tracker ga-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe ma ghara inwe nrụgide. iHelp bara uru dị ukwuu n'ihi na ọ ga-eme ka ị mara ma ọ bụ dekọọ ma ọ bụrụ na onye agadi bụ:
Ọ bụrụ na ndị agadi ahụ echeghị na ọ na-adịghị mma, ọ / ọ nwere ike pịa bọtịnụ oku maka sekọnd atọ iji kpọọ oku na ekwentị ahụ. iHelp Ngwa GPS Tracker okenye eziga SMS site na netwọk GSM wireless. iHelp bụ obere, mara mma na obere. Ọ bụ ezigbo enyi maka ndị agadi.
iHelp - Ngwaọrụ GPS Tracker
3 Ụcha Dị Iche
1. Ụwa kasị nta 3G (WCDMA) nke onwe onye / GPS tracker.
2. Ụlọ ọrụ nkwụnye ọrụ na-enye ụzọ ọzọ ị ga-esi na-akwụ ụgwọ ma mee ka ọ dịkwuo ngwa ngwa ma dị mfe iji.
3. Nlekọta oge nyocha site na satịlaịtị GPS.
5. AGPS, TTFF na 30 sekọnd (10 sekọnd maka GPRS gụnyere).
6. Daa mkpu maka ụmụaka na ndị agadi, ndidi.
7. Ebube nke ima jijiji.
8. Na batrị Lithium 900 mah Lithium na-agbanye ọkụ.
9. Ejiri 3D G-sensor rụọ ọrụ maka mbugharị, mkpuchi egwu na njikwa ike.
10. Nlekota olu.
11. Ụzọ abụọ Voice nkwurịta okwu.
12. Ihe ndekọ data: Ọnọdụ 60000.
14. Firmware kwalite n'elu ikuku.
15. Nzaghachite map nke ọnọdụ dị ugbu a.
16. Bọtịnụ mberede SOS.
17. Oti mkpu Geo-zone, Ịgba ọsọ ọsọ.
18. Nchegharị njem.
19. U-blox nkà na ụzụ GPS.
* Nkwurịta okwu: TCP / IP jikọtara GPRS klas 10, ozi SMS, Voice
* Antenna: Wuru na ngwa FPC
* Chipset GPS: uBlox 0702 (AGPS Nkwado)
* Oge natara: 1575.42 MHz
* Nzuzo amalite: ihe dịka 32S, ụdị TTFF (95%)
* Mmalite ọkụ: ihe ruru 32S, Ụdị TTFF dị (95%)
* Mmalite mmalite: dịka: 1S, Ụdị TTFF dị (95%)
* Antenna: Ejikọta n'ime eriri seramiiki
Nkọwa ihe nrụpụta
Ndaghachi batrị: Rechargeable, 3.7V, 900mAh (Li-Poly)
Ebu ibu (NET): 35g
Nzuzo 366 2 Echiche Taa
iHelp 3G / 4G GPS Tracking Keychain, Mgbapụta mmiri,…
GPS Pendant Tracker (Dementia Okenye & )mụaka) [GPS014D]
iPenguin - Onye Nlekọta Nchekwa nke okenye nke IP CCTV…
EA014 - OMG Wireless Bed Exit Mkpu maka Home…
EA021 - Ikuku Ala Ikuku Ala Mkpu maka [lọ [Okenye…
EA015 - OMG Wireless oche Pad Exit Mkpu maka Home…
EA018 - OMG Waterproof Public Toilets Sound na…
iAlert - Igwefoto Ntughari ikuku ikuku / CCTV…